Bokin' i Malakia - Wikipedia
Bokin' i Malakia
(tonga teto avy amin'ny Bokin'i Malakia)
Ny Bokin' i Malakia na Bokin' i Malaký dia boky ao amin’ ny Tanakh (Baiboly hebreo) sy ao amin’ ny Testamenta Taloha ao amin’ ny Baiboly kristiana. Isan’ ireo atao hoe Mpaminany madinika izy. Ahitana ireo tenin’ ny mpaminany mahazatra toy ny fampahatsiahivana ny nifidian’ Andriamanitra an’ i Israely ho vahoakany, ny fahamasinan’ Andriamanitra, ny fahamarinana ara-piaraha-monina ary ny tokony hanajana ny fanompoam-pivavahana. Ny hafatra eskatolojika ny amin' ny Andron' i Iahveh dia mikasika an’i Israely ihany fa tsy ny firenena rehetra. Miresaka misimisy momba ny fanambadiana koa ny Bokin' i Malakia.
Ny mpaminany Malakia, nataon'i Duccio di Buoninsegna, taona 1308-1311.
2 Ny anaran' ny boky
3.1 Ny fitiavan' Andriamanitra ny Israely (1. 1-5)
3.2 Ireo mpisorona izay tsy nanoa an’ Andriamanitra (1. 6 – 2.9)
3.3 Ny fanambadiana (2.10-16)
3.4 Ny Andron' i Iahveh (2.17 – 3. 5)
3.5 Ny ampahafolon-karena (3.6-12)
3.6 Ny valin’ny natao amin’ ny Andron’ ny Fitsarana (3.13-21)
3.7 Ny lalàn’i Mosesy sy ny hiverenan’ i Elia (3. 22-24)
4 Lanjan' ny boky
Ny teny hebreo hoe מַלְאָכִי / malakhi (izay midika hoe "irako" na "mpitondra hafatro") dia natao lohatenin’ ny boky. Notsoahana tao amin’ ny Bokin’ i Malakia izany teny izany.
Ireo mpanao heviteny jiosy voalohandohany dia nihevitra fa i Ezra (na Esdrasa), mpisorona sy mpanavao fivavahana hebreo tamin’ny taonjato faha-5 tal. J.K., no nanoratra ny Bokin’ i Malakia, nefa ny mpikaroka momba ny Baiboly ankehitriny dia miahiahy ny amin’ izany. Tsy resy lahatra koa izy ireo amin’ ny fampiasana ho anaran-tsamirery ny teny hebreo hoe malakhi ao amin’ ny Mal. 1.1. izay miseho koa ao amin’ ny Mal. 3.1.
Na dia boky farany ao amin’ny Testamenta Taloha aza ny Bokin’ i Malakia ao amin’ ny dikan-tenin’ ny Baiboly kristiana, sady farany ao amin’ ireo Mpaminany madinika (madinika noho ny sorany fohy), ao amin’ ny fizaràna faharoan’ ny Tanakh (Baiboly hebreo), tsy izy no nosoratana farany. Ny Bokin’ i Malakia dia voasoratra taorian’ny taona 516 tal. J.K., fotoana nanombohan’ny fanompoam-pivavahana tao amin’ny Tempoly (Mal. 1.13), sy talohan’ ny nandraràn’ i Nehemia ny fanambadian' ny Jiosy amin' ny hafa firenena (taona 445 tal. J.K.) Mety teo anelanelan’ ny taona 460 sy 450 tal J.K. izany no nanoratana ny Bokin' i Malakia.
Amin' ny teny hebreo dia atao hoe ספר מַלְאָכִי / Sefer Mal’ākhî ny Bokin' i Malakia. Ao amin' ny Septoajinta amin'ny teny grika izy dia atao hoe Μαλαχίας ΙΒʹ / XII Malakhías (ny ipsilôna beta ΙΒʹ dia manambara ny maha mpaminany madinika laharana faharoa ambin' ny folo azy).
Ny Bokin’ i Malakia dia misy toko telo na efatra arakaraka ny mpanonta Baiboly, ka ny toko fahatelo izay misy andininy 24 amin’ ny Baiboly sasany dia voazara ho toko faha-3 (3.1-18) sy faha-4 (4.1-6) amin’ ny Baiboly hafa. Azo zaraina fito io boky io ka ny tsirairay aminy dia mifanandrify amina lahatenim-paminaniana izay aseho amin’ny endrika fampianarana, afa-tsy ny fizaràna farany izay heverin’ ny mpikaroka momba ny Baiboly sasany fa tovana nataon' olona hafa taty aoriana mba hitovian’ ilay "mpitondra hafatra" (malakhi) (Mal. 3.1) amin’ ny mpaminany Elia.
Ny fitiavan' Andriamanitra ny Israely (1. 1-5)Hanova
Ny faminaniana voalohany dia manamafy ny fitiavan’ Andriamanitra an’ i Israely izay vahoaka nofidiny, sy ny tsy fankasitrahany an’ i Edôma.
Ireo mpisorona izay tsy nanoa an’ Andriamanitra (1. 6 – 2.9)Hanova
Ao amin’ ny faminaniana faharoa, dia nanaovan’ ny mpaminany teny mafy ireo mpisorona sy ny vahoaka noho ny tsy nanajany ny anaran’ Andriamanitra tamin’ ny nanaovana sorona biby marary, ka famaizana no hihatra aminy raha mikiry tsy manatantaraka ny tokony hataony.
Ny fanambadiana (2.10-16)Hanova
Ny faminaniana fahatelo dia mikasika ny fisaraham-panambadiana sy ny fanambadian’ ny Jiosy ny hafa firenena (jentilisa) izay tsy sitrak’ Andriamanitra. Tamin’ ny alalan’ ny fanambadiana jentilisa dia tsy manaja ny fanekem-pihavanana tao Sinay (na Sinaia) ny vahoaka jiosy.
Ny Andron' i Iahveh (2.17 – 3. 5)Hanova
Ny faminaniana fahefatra dia mikasika ny Andron' i Iahveh sy manambara ny hiavian’ Andriamanitra, izay hitsara ny mpanao ratsy, sy ny hiavian’ny "iraka" (malakh) izay hanadio ny raharaham-pisoronana sy ny Tempoly.
Ny ampahafolon-karena (3.6-12)Hanova
Ny faminaniana fahadimy dia manazava fa misy ny valala ka ratsy ny fiotazam-bokatra ary misy ny mosary noho ny famitahan’ ny vahoaka an’Andriamanitra tamin’ ny tsy nanoloran’ izy ireo ny ampahafolon-karena manontolo izay efa voasoratra ao amin’ ny lalàna. Raha aloan’ izy ireo manontolo izany, dia hesorin’ Andriamanitra ny ozona ary hampahavokatra ny fambolena izy.
Ny valin’ny natao amin’ ny Andron’ ny Fitsarana (3.13-21)Hanova
Ny faminaniana farany dia manambara fa ny fankatoavana an’ Andriamanitra dia ho valiana soa ary sazy no miandry ny mpanota amin’ ny Andron’ny Fitsarana.
Ny lalàn’i Mosesy sy ny hiverenan’ i Elia (3. 22-24)Hanova
Ireo tovana roa dia mamporisika indray ny vahoaka mba hahatsiaro ny lalàn’ i Mosesy (4.4) sy manambara fa hirahina ny mpaminany Elia alohan’ ny hiaviana’ny andron' i Iahveh, izay lehibe sy mahatahotra (4.5).
Lanjan' ny bokyHanova
Ny Bokin’ i Malakia dia mitondra fahalalana ara-tantara mikasika ny zava-nisy teo amin’ ny fivavahana sy ara-tsôsialy tao Palestina taorian’ ny Fahababoan’ ny Jiosy tany Babilôna teo anelanelan’ ny taona 586 sy 538 tal. J.K., ary talohan’ ny nandaminana indray ny firenena jiosy nataon’ i Nehemia. Ho an’ ny Kristiana, manana ny lanjany izany satria mpialoha lalana ny Mesia.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bokin%27_i_Malakia&oldid=1041934"
Dernière modification le 19 Desambra 2021, à 06:35
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 06:35 ity pejy ity.